Asomafo Nnwuma 9 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Asomafo Nnwuma 9:1-43
9 Na Saul a na ɔda so hunahuna Awurade asuafo+ no na ɔpɛ sɛ okunkum+ wɔn no kɔɔ ɔsɔfo panyin no nkyɛn 2 kɔkae sɛ ɔmma no nkrataa a ɔde bɛkɔ Damasko hyia adan mu, sɛnea ɛbɛyɛ a obetumi akyere* obiara a obehu sɛ ɔnam Ɔkwan No so,+ mmarima ne mmea, de wɔn aba Yerusalem. 3 Bere a ɔrekɔ a ɔbɛn Damasko no, mpofirim ara hann bi fi soro hyerɛn twaa ne ho hyiae,+ 4 na ɔhwee fam, na ɔtee sɛ nne bi ka kyerɛɛ no sɛ: “Saul, Saul, dɛn nti na wotaa me?”+ 5 Ɔkae sɛ: “Ɛyɛ wo hena, Owura?” Ɔkae sɛ: “Ɛyɛ me Yesu a wotaa no no.+ 6 Nanso sɔre+ na kɔ kurow no mu, na wɔbɛka nea ɛsɛ sɛ woyɛ akyerɛ wo.” 7 Afei na mmarima a wɔne no rekɔ no+ gyinagyina hɔ a wontumi nkasa,+ na ɛwom sɛ na wɔte ankasa sɛ nne bi rekasa+ de, nanso na wonhu obiara. 8 Na Saul sɔre fii fam; ná n’ani gu so de, nanso onhu hwee.+ Enti wosusoo ne nsa de no kɔɔ Damasko. 9 Na wanhu hwee nnansa,+ na wannidi na wannom. 10 Ná osuani bi wɔ Damasko a wɔfrɛ no Anania,+ na Awurade ka kyerɛɛ no anisoadehu mu sɛ: “Anania!” Na ose: “Awurade, mini.” 11 Awurade ka kyerɛɛ no sɛ: “Sɔre, kɔ borɔn a wɔfrɛ no Tẽẽ no so, na kɔ Yuda fie kɔhwehwɛ ɔbarima bi a wɔfrɛ no Saul, a ofi Tarso+ no. Na hwɛ! ɔrebɔ mpae, 12 na wahu ɔbarima bi a wɔfrɛ no Anania wɔ anisoadehu mu sɛ waba de ne nsa abegu no so sɛnea obehu ade.”+ 13 Nanso Anania buae sɛ: “Awurade, mate ɔbarima yi ho asɛm afi nnipa pii hɔ, sɛ ɔde bɔne bebree adi w’akronkronfo a wɔwɔ Yerusalem no. 14 Afei wanya tumi afi asɔfo mpanyin no nkyɛn sɛ ɔmfa wɔn a wɔbɔ wo din+ no nyinaa ngu mpokyerɛ mu.” 15 Na Awurade ka kyerɛɛ no sɛ: “Si kwan so kɔ, efisɛ ɔbarima yi yɛ anwenne a wɔapaw+ ama me sɛ ɔmfa me din nkɔ amanaman+ ne ahene+ ne Israel mma nkyɛn. 16 Na mɛkyerɛ no nneɛma dodow a me din nti etwa sɛ ɛto no no pefee.”+ 17 Enti Anania kɔe na ɔhyɛn ofie no mu, na ɔde ne nsa guu no so kae sɛ: “Me nua Saul, Awurade Yesu a oyii ne ho adi kyerɛɛ wo ɔkwan a na wonam so reba so no na wasoma me, sɛnea ɛbɛyɛ a wubehu ade na honhom kronkron ahyɛ wo mã.”+ 18 Na amonom hɔ ara biribi a ɛte sɛ abona fifii n’ani so guu fam, na ohuu ade; na ɔsɔre ma wɔbɔɔ no asu, 19 na odidii nyaa ahoɔden.+ Na odii nna kakra wɔ asuafo a wɔwɔ Damasko+ no nkyɛn, 20 na ntɛm ara na ofii ase wɔ hyia adan mu kaa Yesu ho asɛm+ sɛ ɔne Onyankopɔn Ba no. 21 Nanso ɛyɛɛ wɔn a wɔretie no no nyinaa nwonwa na wɔkae sɛ: “Ɛnyɛ oyi na ɔsɛee+ wɔn a wɔbɔ din yi wɔ Yerusalem no? Ɛnyɛ ɔno na ɔde botae koro no ara baa ha sɛ ɔbɛkyere wɔn de wɔn akɔma asɔfo mpanyin no?”+ 22 Nanso Saul kɔɔ so nyaa ahoɔden, na ɔmaa Yudafo a wɔwɔ Damasko no ho dwiriw wɔn bere a ɔde adanse a ntease wom kyerɛe sɛ oyi ne Kristo no.+ 23 Na nna pii akyi no, Yudafo no bɔɔ pɔw sɛ wobekum no.+ 24 Nanso Saul hui sɛ wɔabɔ ne ho pɔw. Na bio nso na wɔwɛn apon no ano awia ne anadwo sɛ wobenya no akum no.+ 25 Enti n’asuafo no faa no anadwo no de no sii kɛntɛn mu de no faa ɔkwan bi a ɛda ɔfasu no mu mu, gyaagyaa no nkakrankakra sii fam.+ 26 Oduu Yerusalem+ no, ɔbɔɔ mmɔden sɛ ɔde ne ho bɛbɔ asuafo no; nanso na wɔn nyinaa suro no, efisɛ na wonnye nni sɛ ɔyɛ osuani. 27 Enti Barnaba boaa no+ de no kɔɔ asomafo no nkyɛn, na ɔkaa sɛnea wahu Awurade+ wɔ ɔkwan so na ɔne no akasa,+ ne sɛnea ɔde akokoduru akasa wɔ Yesu din mu wɔ Damasko+ no ho asɛm nyinaa kyerɛɛ wɔn. 28 Na ɔne wɔn tenae, dii akɔneaba wɔ Yerusalem, kasae Awurade din mu akokoduru so;+ 29 na ɔne Yudafo a wɔka Hela kasa no kasae dii anobaabae. Na wɔbɔɔ mmɔden sɛ wobekum no.+ 30 Bere a anuanom no huu eyi no, wɔde no baa Kaesarea na wɔma ɔkɔɔ Tarso.+ 31 Nokwasɛm ni, saa bere no asafo+ a ɛwowɔ Yudea ne Galilea ne Samaria nyinaa nyaa asomdwoe, na wɔyɛɛ den; na bere a wɔde Yehowa+ suro ne honhom kronkron+ no awerɛkyekye nantewee no, wɔkɔɔ so dɔe. 32 Afei bere a Petro rekyinkyin mmeae nyinaa no, okoduu akronkronfo a wɔte Lida+ no nso nkyɛn. 33 Ɛhɔ na ohuu ɔbarima bi a wɔfrɛ no Enea a wabubu ada ne mpa so mfe awotwe. 34 Na Petro ka kyerɛɛ no sɛ:+ “Enea, Yesu Kristo asa wo yare.+ Sɔre na tow wo mpa.” Na ntɛm ara ɔsɔree. 35 Na wɔn a wɔtete Lida ne Saron+ asasetaw so nyinaa huu no, na wɔdan baa Awurade nkyɛn.+ 36 Ná osuani bi wɔ Yopa+ a wɔfrɛ no Tabita, a sɛ wɔkyerɛ ase a, ɛkyerɛ Dorka. Ná nnwuma pa+ ne adɔe ayɛ no ma. 37 Na nna no mu no, ɛbae sɛ ɔyare wui. Enti woguaree no de no kɔtoo abansoro dan bi mu. 38 Afei esiane sɛ Lida bɛn Yopa+ nti, bere a asuafo no tee sɛ Petro wɔ saa kurow no mu no, wɔsomaa mmarima baanu kɔɔ ne nkyɛn kɔsrɛɛ no sɛ: “Yɛsrɛ wo ntwentwɛn wo nan ase sɛ wobɛba yɛn nkyɛn.” 39 Ɛnna Petro sɔree na ɔne wɔn kɔe. Na oduu hɔ no, wɔde no kɔɔ abansoro dan no mu; na akunafo no nyinaa de su baa ne nkyɛn de ntade nhyɛase ne ntade nguguso+ a Dorka yɛe bere a ɔwɔ wɔn nkyɛn no bebree bɛkyerɛe.+ 40 Na Petro maa obiara pue kɔɔ abɔnten,+ na obuu nkotodwe bɔɔ mpae, na ɔdan ne ho hwɛɛ amu no kae sɛ: “Tabita, sɔre!” Obuee n’ani, na n’ani bɔɔ Petro so no, ɔsɔre tenaa ase.+ 41 Ɔteɛɛ ne nsa na ɔmaa no so,+ na ɔfrɛɛ akronkronfo ne akunafo no de no maa wɔn a ɔwɔ nkwa mu.+ 42 Wɔtee eyi wɔ Yopa nyinaa, na bebree begyee Awurade dii.+ 43 Ɔtenaa Yopa dii nna kakraa+ wɔ Simon, nhomahyɛfo+ bi nkyɛn.
Asomafo Nnwuma 9